လူကြိုက်အများဆုံးအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှု ulator Emulator.online ▷🥇
နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များသည်လူမှုရေးကွန်ယက်များမှကွန်ယက်သို့နေ့စဉ်ဘဝ၏အရိုးရှင်းဆုံးအရာဝတ္ထုများကိုအွန်လိုင်းဝယ်ယူခြင်းအထိနည်းပညာကိုယ်နှိုက်ကိုပိုမိုအသုံးပြုရန်ပိုမိုအာရုံစိုက်လာသည်။ ထို့ကြောင့်လိမ်လည်သူများကိုတောင်မှဆင်းရဲသောသုံးစွဲသူများကိုသူတို့၏လက်ထဲသို့ရောက်စေရန်သူတို့၏နည်းစနစ်များကိုစုံလင်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုထောက်ပြရန်မလိုပါ။ အမှန်မှာအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုသည်သုံးစွဲသူများ၏စာနာမှု၊ ကြောက်ရွံ့မှုနှင့်လောဘကြီးမှု၏အားသာချက်ဖြစ်သည် အင်တာနက်ကို.
အဖတ်ကိုလည်း: spam နှင့် SMS လိမ်လည်မှုကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားမလဲ
လူသိများဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပြီးယခုတွင်ပြေးနေသည် Facebook က အချို့သောနှစ်များအတွက်, ကလိမ်လည်မှုဖြစ်ပါတယ် ray ဘန်ကီမွန်းက ဈေးနှုန်းချိုသာသောပုံရိပ်တစ်ခုဖြင့်ဖြည့်စွက်ပါ။ ၁၉၉၉ ယူရိုဈေးနှုန်းဖြင့်ဆွဲဆောင်ထားသည့်ထိုပုံရိပ်ကို နှိပ်၍ စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသောဤလိမ်လည်မှုသည်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်မှားယွင်းစွာပြုလုပ်ပြီးဆက်လက်ပြုလုပ်နေသည်။ ဤဖြစ်ရပ်များတွင်သားကောင်ကိုငွေသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ဘဏ်အထောက်အထားများကိုလွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြင့်သူတို့သည်ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်ကိုအလွယ်တကူရရှိနိုင်သည်သို့မဟုတ်စျေးနှုန်းချိုသာသောကုန်ပစ္စည်းကိုရရှိနိုင်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
... ပြီးတော့အခမဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ လိမ်လည်သူတွေက ၀ န်ဆောင်မှုကိုအချိန်ယူပြီးအခမဲ့ပေးမယ်လို့ကတိပေးထားတယ်။ ဒီပြmechanismနာကဘာသာရပ်ဟာသူတို့မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့စနစ်ကနေတစ်ဆင့်ငွေပေးချေရမယ်၊ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမအကျိုးစီးပွားရှိပါတယ်။
၅။ "သင်ချေးငွေလိုအပ်ပါသလား။ "
ဤသည်မှာဂန္ထဝင်အရှိဆုံးသောလိမ်လည်မှုဖြစ်ပြီးအကြွေးများစွာအကြိမ်ကြိမ်များပြားစွာကျန်နေခဲ့ကြသောလူများစွာသည် ဆက်လက်၍ မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင်ဆက်ကျဆင်းနေသည်။ တကယ်တော့စကားလုံး "ချေးငွေ" များအတွက်ပြောရလျှင်အဖြစ်မှားယွင်းစွာအသုံးပြုသည် "အတိုး"စင်စစ်အားဖြင့်ဤကမ်းလှမ်းမှုနောက်ကွယ်ရှိသူများသည်အလေ့အကျင့်များဖွင့်ရန်ငွေတောင်းခံပြီးလေထဲပျောက်ကွယ်သွားလေ့ရှိသည်။ ချေးငွေနှင့်ငွေကြေးလိုအပ်ချက်ရှိပါကလူသိများသောဘဏ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အမြဲဆက်သွယ်ပါ။
ကံမကောင်းစွာပဲလိမ်လည်မှုကိုလျှောက်ထားရန်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးလူမှုရေးကွန်ယက်ခေတ်တွင်ကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့သွားသည်။ အခြားသူမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအလွယ်တကူသိရှိနိုင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ၊ သို့သော်အဆိုးဆုံးမှာအများအားဖြင့်သားကောင်သည်၎င်းကိုနောက်ကျလွန်းသည်ဟုမှတ်ယူထားသည်။ ဤသဘောမျိုးဖြင့်ချေးငွေလိမ်လည်မှုများသည်မြင့်တက်လျက်ရှိသည် အထောက်အထားခိုးယူမှု- လိမ်လည်မှုတွင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ဘဏ္dataာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုခိုးယူခြင်း၊ ၎င်းတွင်၎င်းကို အသုံးပြု၍ ချေးငွေလျှောက်ထားခြင်းသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းမှပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ အားလုံးသည်ဥပမာအားဖြင့်သူတို့သည်ချေးငွေလျှောက်ထားရန်ကြိုးစားသော်လည်းလိမ်လည်သူများမှပြုလုပ်သောငွေကိုမပေးရခြင်းအတွက်ငြင်းပယ်ခံရခြင်းမှလိမ်လည်မှုကိုသတိပြုမိလာကြမည့်သားကောင်များကိုထိခိုက်စေသည် ထို့ကြောင့်ဤအချက်ကိုအာဏာပိုင်များထံ တင်ပြ၍ စစ်ဆင်ရေးကိုငြင်းဆိုရန်တောင်းဆိုခြင်းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။
၇။ "ခင်ဗျားယူရို ၁၀၀၀၀ ရပြီ။ " (သို့) "ဒီနေရာကိုနှိပ်လိုက်ရင်မင်းအတွက်သင့်အတွက်အခမဲ့ iPhone 7!":
ဝက်ဘ်ကြည့်နေစဉ်မည်သည့်အလားတူ pop-up များကိုတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူး။ ဒီကမ်းလှမ်းချက်တွေကိုဘယ်တော့မှမနှိပ်ရဘူးဆိုတာသတိရဖို့လိုတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးကိစ္စတွေမှာဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးကူးစက်ခံရချိန်မှာအဆိုးဆုံးမှာတစ်ယောက်ယောက်ကသင့်ကွန်ပျူတာကိုအဝေးမှစူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပြီးရယူရန်လိုအပ်သည့်အချက်အလက်အားလုံးကိုခိုးယူသည်။ သင့်ဘဏ်အကောင့်များ ။
အဖတ်ကိုလည်း: အင်တာနက်က "ဂုဏ်ယူပါတယ်၊ မင်းအနိုင်ရတယ်" လို့ပြောရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ အဲဒါကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားနိုင်မလဲ
၈၀၀ ***** ကိုခေါ်ပြီးမင်းရဲ့လျှို့ဝှက်လေးစားသူကိုရှာပါ။ ":
... နှင့်ဆက်ဆက်မဟုတ်ပရိသတ်တွေ; ဤနံပါတ်များကိုခေါ်ဆိုရာတွင်ဆက်သွယ်မှုအခကြေးငွေတစ်ခုတည်းသာကုန်ကျနိုင်ပြီးမလိုလားသော ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အချိုးအစားမညီမျှမှုပမာဏကိုလည်းကောက်ခံနိုင်သည်။
ဤကိစ္စတွင်ယုံကြည်စိတ်ချရန်အမြဲကောင်း၏ တရားဝင်ဆိုဒ်များ ed ခွင့်ပြုချက် ဝဘ်ပေါ်တွင်ဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း။ အမှန်စင်စစ်၊ အမှတ်တံဆိပ်ကို ပို၍ လူသိများပြီးအသိအမှတ်ပြုလေလေ၊ အမှတ်တံဆိပ်၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုခိုးယူသည့်အခါ ၀ န်ဆောင်မှုတွင် ၀ ယ်ယူသောကုန်ပစ္စည်းများပင်လျှင်ကံမကောင်းသောသူများထံပို့ရန်လွယ်ကူသည်။ လက်ခံသူထံမပို့ပါနှင့် ၀ င်သောအခါဝက်ဘ်ဆိုက်မူရင်းပုံသဏ္mayာန်ရှိကောင်းရှိနိုင်လိမ့်မည်၊ သို့သော်ကုန်ပစ္စည်းအမြောက်အများ ၅၀% လျော့နည်းသည်ဟူသောအချက်သည်ဖြစ်နိုင်သောလိမ်လည်မှုအတွက်နိုးထစေသောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖြစ်သင့်သည်။
အဖတ်ကိုလည်း: eBay ကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားရမလဲ
၁၀။ စီးပွားရေးအီးမေးလ်လိမ်လည်မှုနှင့်စီအီးအိုလိမ်လည်မှု -
အထူးသဖြင့်ကုမ္ပဏီများအားအကျိုးသက်ရောက်စေသောလိမ်လည်မှုအမျိုးအစားအချို့သည်ရာဇ ၀ တ်သားများအနေဖြင့်အခြားကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းမှမန်နေဂျာများနှင့်စီးပွားဖြစ်ဆက်သွယ်မှုများပြုလုပ်ပြီး၊ မှားယွင်းသောသတင်းစကားများဖြင့်သော်၎င်း၊ , ကြီးမားသောငွေပမာဏကိုလိမ်လည်သူများ၏နာမ၌အကောင့်စစ်ဆေးနေဖို့လမ်းကြောင်းပြောင်း။
အဖတ်ကိုလည်း: အတု၊ လိမ်လည်မှုနှင့်မဟုတ်သောအီးမေးလ်များကိုအသိအမှတ်ပြုပါ
၏သဘောတရားများအကြားပြည်ထောင်စုကနေပေါ်ပေါက် "အသံ" mi "အထောက်အထားလိမ်လည်မှု" ၎င်းသည်အသုံးပြုသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏ဗဟုသုတကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ အသုံးပြု၍ သူတို့ကိုလှည့်စားရန်ရည်ရွယ်သောလိမ်လည်မှုဖြစ်သည်။
သတိပေးချက်သည်မိုဘိုင်းဖုန်းသို့မဟုတ်သားကောင်များ၏စာတိုက်ပုံးတွင်သူတို့ကိုယ်ပိုင်ငွေစာရင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သံသယဖြစ်ဖွယ်အရောင်းအ ၀ ယ်များမှရရှိသည်။ သတိပေးချက်ကြောင့်ထိခိုက်ခံရသောအသုံးပြုသူသည်အင်တာနက်လိပ်စာပေါ်တွင်ပုံတူနှိပ်ခြင်းနှင့် ၀ င်ရောက်သည်။ ဤအချက်သည်မှားယွင်းသောအကောက်ခွန်မဲ့နံပါတ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကိုလက်ခံရရှိသည်။ ထိုအကူသမားများသည်ခိုးမှုကိုရပ်တန့်လိုသောဘဏ် ၀ န်ထမ်းများဖြစ်သည်ဟုဟန်ဆောင်ကာ၊ ဆက်သွယ်မှုကုဒ်များရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်သားကောင်၏နောက်ကွယ်ရှိငွေလွှဲပြောင်းမှုများသို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှုများကိုခွင့်ပြုသည်။
la ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန သုံးစွဲသူများကိုလှည့်ဖြားရန်ရည်ရွယ်သည့်အမျိုးမျိုးသော application များတည်ရှိမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး mobile bonus ကိုအခွင့်ကောင်းယူလိုသူများထံမှမကြာသေးမီကအစီရင်ခံစာများမည်မျှရောက်ရှိလာသည်ကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချသည်။ "Mobility ဘောက်ချာ 2020"။ လျှောက်လွှာပို့ခြင်းမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်အပိုဆုတောင်းခံရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုတရား ၀ င်ချန်နယ်များမှမည်သို့ဆက်သွယ်သည်ကိုဌာနမှဆက်သွယ်သည်။ လှည့်စားသောလျှောက်လွှာများကိုအရည်အချင်းရှိသောအာဏာပိုင်များထံချက်ချင်းအကြောင်းကြားပြီးဖြစ်သည်။
Ransomware ဆိုသည်မှာဟက်ကာများသည်ကွန်ပျူတာ (သို့) ကွန်ပျူတာစနစ်တွင် malware တပ်ဆင်သောသားကောင်၏ဖိုင်များအားပိတ်ဆို့ရန်အတွက်ရွေးနုတ်ဖိုးပေးချေရန်တောင်းဆိုခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့၏ဖိုင်များသို့ဝင်ရောက်ခြင်းကိုကန့်သတ်သည်။ ransomware ထောင်ချောက်များသည်အလွန်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အဆိုးဆုံးမြင်ကွင်းမှာ ransomware လိမ်လည်မှုသည်သားကောင်၏လုံခြုံမှုနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုကိုထိခိုက်စေပြီးဆိုးဝါးသောပုံစံတစ်ခုအနေဖြင့်ဟက်ကာများကအီးမေးလ်မှတစ်ဆင့်သူတို့ကကင်မရာကို hack လုပ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ သားကောင်တစ် ဦး ရုပ်ရှင်ကြည့်နေစဉ်ဝဘ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ
အီးမေးလ်တွင်အသုံးပြုသူ၏စကားဝှက်ကိုထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုခြင်းဖြင့်ထောက်ခံထားသော cam-hacking ကြော်ငြာသည်သင်အားနင့်အဆက်အသွယ်များသို့မဟုတ်သင်တို့၏အဆက်အသွယ်အားလုံးထံဗွီဒီယိုပို့ခြင်းဖြစ်စေ၊ အမှန်တကယ်တွင်၊ ၎င်းသည်ကိုင်တွယ်ခြင်းသက်သက်သာဖြစ်သည်။ လှည့်စားသူများကဗွီဒီယိုဖိုင်များမရှိ၊ သင်၏အချက်အလက်ထဲသို့တောင်မှတောင်မဝင်နိုင်ကြပါ၊ အကြောင်းမှာသူတို့ရရှိထားသည့်စကားဝှက်ကိုလူသိများသောလျှို့ဝှက်ဒေတာဘေ့စ်များမှပေါက်ကြားပြီးအီးမေးလ်များပေါက်ကြားခြင်းဖြစ်သည်။
အမြဲတမ်းနိုးနိုးကြားကြားရှိခြင်းအပြင်၊ ကျွမ်းကျင်သူများကအောက်ပါတို့ကိုအကြံပြုသည် -
မေ သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကုဒ်နံပါတ်များကိုချက်လက်မှတ်သို့ပေးပို့ပါ - ဥပမာအားဖြင့်ဘဏ်များသည်အိမ်တွင်းဘဏ်လုပ်ငန်း login အထောက်အထားများကိုအီးမေးလ် (သို့) ဖုန်းဖြင့်ဘယ်တော့မှမမေးပါနှင့်။
ရှိ သတိ စာရွက်စာတမ်းများမိတ္တူများပေးပို့သောအခါ။
မကူးပါနဲ့ မေ အကယ်၍ မသေချာလျှင်အီးမေးလ် (သို့) စာသားမက်ဆေ့ခ်ျမှတဆင့်ပေးပို့သောပူးတွဲဖိုင်များဝိသေသလက္ခဏာ ပေးပို့သူထံမှ;
ဒါ့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Ransom ဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ် Crypto ဆန့်ကျင်သော anti-Ransomware ပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုရန်လည်းဖြစ်နိုင်သည်
SPID နှင့်ပြissuesနာများကိုကြည့်ခြင်း - ၎င်းတို့ကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်
APK application ကဗိုင်းရပ်စ်လားဆိုတာဘယ်လိုစစ်ဆေးမလဲ
သင်၏ကင်မရာ (သို့) ဝက်ဘ်ကင်မရာသည်ဟက်ကာများကိုစစ်ဆေးပြီးဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးပါ
malware ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ၎င်းသည်မည်မျှအန္တရာယ်ရှိသနည်း။
Windows 10 နှင့်7အတွက် Microsoft လုံခြုံရေးအစီအစဉ်များ
PC, Mac၊ စမတ်ဖုန်းများနှင့်တက်ဘလက်များမှအရွယ်ရောက်ပြီးသောဆိုဒ်များကို ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုဘယ်လိုပိတ်ဆို့မလဲ
Chrome တွင်ကျပန်း၊ အားကောင်းသောနှင့်အလိုအလျောက်စကားဝှက်များကိုထုတ်လုပ်ပါ
Alexa နှင့် Google Assistant မှအသံသွင်းချက်များကိုဖျက်ပစ်ရန်